Oge Devonian: njirimara, geology, ihu igwe, anụmanụ na osisi | Netwọk Mgbasa Ozi
Oge Paleozoic nwere nkeji 5 nkewa nkewaziri oge nke ihe dị iche iche dị oke mkpa na ndụ. Taa, anyị ga-ekwu maka ya Oge Devonian. Oge a dị ihe dịka afọ 56 nke ụwa anyị gbanwere mgbanwe dị ukwuu, ọkachasị n'ogo nke ihe dị iche iche dị iche iche, kamakwa n'ogo nke ala.
N'isiokwu a anyị ga-elekwasị anya n'ịgwa gị njirimara, ihu igwe, geology, flora na fauna nke oge Devonian.
2 Okpukpe na nke Devonian
3 Oge Devonian ihu igwe
5 Ihe na-akpata mkpochapụ nke oge Devonian
Oge a malitere ihe dịka 416 nde afọ gara aga wee kwụsị ihe dịka afọ 359 gara aga. Dị ka oge niile, anyị ga-ekwupụta na mbido na njedebe nke oge abụghị nke ziri ezi n'ihi enweghị ezigbo ozi dị otú ahụ. Nke a bụ oge nke anọ nke oge Paleozoic. Mgbe oge Devonian gachara oge carboniferous.
N’oge a, ọtutu anụmanụ dị iche iche, karịchara ndị bi n’oké osimiri. Enwekwara mgbanwe ndị dị mkpa na ebe obibi nke ụwa dị ka nnukwu osisi na anụmanụ ndị mbụ bi na mbara ala pụtara. N'agbanyeghị oge ndụ na-agagharị n'ọtụtụ ọkwa, Devonian nwekwara aha ọma dị ka oge nke ọtụtụ anụmanụ na-apụ n'anya. A na-ekwu maka mbibi nke 80% nke ndụ na mbara ụwa anyị.
N’oge a, mbibi nke oke mmadụ mere nke mere ka ọtụtụ ụdị dị iche iche biri n’oge ahụ kwụsị kpam kpam n’ụwa. N'otu oge ahụ anyị nwere oge Devonian, ọ na-ekewa n'ime oge dị iche iche. Ka anyị lee ihe oge ndị a bụ:
Lower Devonian. Ejiri afọ 3 mebere ya na nke a na-akpọ Lochkovian, Pragian and Emsian.
Middle Devonian: gbasara afọ abụọ a na-akpọ Eifelian na Givetian
Oke Devonian: ọ bụ obodo abụọ a na-akpọ Frasniense na Fameniense mebere ya.
Na ngwụsị nke oge a, e nwere otu ọnọdụ mkpochapụ nke mbara ala nke kpatara nnukwu mfu nke ụdị, ọkachasị ndị bi n'oké osimiri nke akụkụ ebe okpomọkụ. Umu umu nke metutara bu coral, fish, crustaceans, mollusks, n'etiti ndị ọzọ. Ọ dabara nke ọma, ọtụtụ ụdị ndị bi na mbara igwe anaghị emetụta ihe mkpochapụ ọtụtụ mmadụ. Ya mere, mmeri nke ebe obibi nke ala nwere ike ịga n'ihu n'ụzọ ya n'enweghị ọtụtụ nsogbu.
Okpukpe na nke Devonian
E gosipụtara oge a site na nnukwu ọrụ nke efere tectonic. Enwere ọtụtụ mmetụ nke guzobere mba ndị ọhụrụ dịka mmalite nke Laurasia. E guzobere ma nwee nnukwu ebe a na-akpọ aha nke Guineawana. Ọ bụ nnukwu ala nke nwere oghere niile dị na osisi ndịda nke ụwa.. Ebe ugwu nke ụwa bụ Siberia na oke osimiri Panthalassa buru ibu ma dị omimi. Oke osimiri niile kpuchitere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ugwu ugwu dum.
Site na echiche nke orogeny, nke a bụ oge nke usoro dị iche iche nke nhazi ugwu malitere, nke anyị nwere Ugwu Appalachian.
Oge Devonian ihu igwe
Ọnọdụ ihu igwe dị na mbara ụwa anyị n'oge oge Devonian dịtụ jụụ. Ogologo okpomoku zuru ụwa ọnụ na-ekpo ọkụ ma na-ezo mmiri na mmiri ozuzo bara ụba. Otú ọ dị, ala kpọrọ nkụ na ala akọrọ dị n'ime nnukwu kọntinent ndị buru ibu.
Ọnọdụ okpomọkụ zuru ụwa ọnụ dị gburugburu 30 degrees. Ka oge na-aga, ọ na-adịwanye ntakịrị ntakịrị ọganihu, na-eru nkezi nke ogo 25. Ka oge na-aga na ngwụsị nke oge Devonian, ọnọdụ okpomọkụ belatara ruo n'ókè nke na ọ bịara n'otu n'ime glaciations ndị gbanwere ụwa anyị n'akụkọ ihe mere eme.
N’oge a enwere mgbanwe dị ukwuu gbasara ihe ndị dị ndụ. Otu n’ime mgbanwe ndị a kachasị mkpa bụ mmeri doro anya nke usoro okike ndị dị n’ụwa. Ka anyị buru ụzọ tụlee ihe ọkụkụ ahụ.
N'oge oge Devonian, obere osisi vaskụla dịka fern amalitelarị itolite. Obere fern ndị a na-enweta mmepe ka ukwuu na akụkụ dị iche iche, ndị kachasị anọchite anya ha. Plantdị osisi ndị ọzọ pụtakwara n'elu kọntinent, dị ka lycopodiophytes. E nwere ụfọdụ ụdị ahịhịa nke na-enweghị ike imeghari n'ọnọdụ gburugburu ebe obibi wee mebie.
Mmụba nke osisi ndị dị n'ụwa butere mmụba nke ikuku oxygen nke dị na mbara igwe kemgbe osisi rụrụ photosynthesis usoro ekele pigments nke chlorophyll. Site na nke a, ọ dịrịrị ndụ nke ụwa mfe ịgbasa site na gburugburu ụwa.
N'ikpeazụ, ụmụ anụmanụ ahụ dịgasị iche iche n'oge Devonian malitere na azụ. Ọ bụ otu n'ime ndị nwere mmụba kasịnụ na ọkwa ndị mmadụ. Ọtụtụ ndị na-akpọ oge a afọ azụ. Umu anumanu dika Sarcopterygians, Actinopterygii, Ostracoderms na Selacians.
Ihe na-akpata mkpochapụ nke oge Devonian
Dịka anyị kwuburu na mbụ, na ngwụcha oge a, usoro mkpochapu mmadụ mere. Ọ kachasị emetụta ụdị ndụ nke oké osimiri. Mbibi ahụ biri ihe dị ka nde afọ 3. Ihe kpatara oke mkpochapu mmadu a bu ihe ndia:
Mbibi dị egwu n’okuku oxygen n’oké osimiri
Okpomọkụ gburugburu ụwa
Uto ma ọ bụ uka
Oké ọrụ mgbawa
Otu n'ime ihe ndị anyị nyere nwere ike inwe obi abụọ banyere uto nke ihe ọkụkụ. N’oge a, nnukwu osisi vaskụl malitere, na-adịkarị ihe dịka mita iri atọ n’elu kọntinent ndị ahụ. Nke a nwere nsonaazụ na-adịghị mma nke na-eme ka enweghi nsogbu na ọnọdụ gburugburu ebe obibi, ebe ọ bụ na osisi ndị a ga-amalite ịmịkọrọ nnukwu mmiri na nri sitere na ala nke ndị ọzọ dị ndụ nwere ike iji mee ihe. Nke a mere ka enweghị ihe dị iche iche dị na mbara igwe.
Enwere m olileanya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere oge Devonian.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Oge Devonian
Nhazi ihe owuwu